Kismaayo: Gudoomiyaha Aqalka Sare oo kulamo kala duwan la qaatay madaxda, salaadiinta iyo siyaasiyiinta maamulka Jubbalan
December 07, 2018	5964
Aqalka Sare Aqalka Sare
Gudoomiya Golaha Aqalka Sare ee Baarlamanka Federalka ah ee Soomaaliyeed Cabdi Xaashi C/laahi iyo wafdi uu hogaaminaayo oo gaaray magaalo xeebeedka Kismaayo, xarunta maamul goboleedka Jubbaland, ayaa kulamo gooni gooni ah la qaatay madaxda, sanaadiinta iyo siyaasiyiinta Jubbaland.
Kulamadaa ayaa ka kala dhacay madaxtooyada Jubbaland, iyo guriga martida ee Jubbaland, Magaalo Xeebeedka Kismaayo.
Shirarkan ayaa looga gol leeyahay sidii xal loogu heli lahaa khilaafaadka ka dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dowlada dhexe ee Soomaaliyeed, xunbaha ka socda Golaha Aqalka Sare oo uu hogaaminaayo Gudoomiye Cabdi Xaashi C/laahi ayaa dhagaysan doona tabashada ay soo gudbiyaan maamul goboleedka Jubbaland.
Inta wafdiga ka socda Golaha Aqalka Sare uu ku suganyahay magaalo xeebeedka ayaa uu kulamo duwan la yeelan doonaa bulshada qeeybaheeda kala duwan.
Dhawaan ayey ahayd markii Gudiga Aqalka Sare ee dalka ay Soo Saareen Warbixin ku Saabsan waxyaabaha ay dowladda Federalka iyo Golaha Iskaashigu isku hayaan iyo sidii xal loogu heli lahaa.
« Guddomiyaja Aqalka sare ayaa kul kulmay oday dhaqameedyo Guddomiyaha Golaha Aqalka Sare iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa kulan la qaatay ururada bulshada rayidka,dhalinyarada,haweenka iyo aqoonyahanada Dowlad Goboleedka Jubaland. »